कोरोना जोखिमबीच खुल्न थाले विद्यालय (फोटोफिचर) – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १७ गते ११:३२
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै बन्द गरिएका विद्यालय जोखिम कायम हुँदै खुल्न थालेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेसँगै विद्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्।
त्यसैगरी, उपत्यक बाहिरका स्थानीय तहले शिक्षक र अभिभावकसँग सल्लाह गरेर भौतिक कक्षा सुरु गरेका छन्। विद्यालय खुलाइए पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरिएको विद्यालय सञ्चालकको भनाई छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा कार्यविधिको परिपालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
कोभिडको दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा वैशाख पहिलो सातादेखि नै विद्यालय बन्द गरिएका थिए । यो अवधिमा अनलाइन, टेलिफोन, घरदैलोलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीकाअनुसार बालबालिका अझै पनि जोखिममै रहेका छन्। ‘जोखिमको अवस्था टरेको छैन। यता विद्यालय खोल्ने निर्णय भइरहेको छ। केही तल–माथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? ’, उनले प्रश्न गरे।